MeisterTask: အသင်းများအဘို့ Task ကို & Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » MeisterTask: အသင်းများအဘို့ Task ကို & Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု
MeisterTask: အသင်းများ APK ကိုများအတွက် Task ကို & Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု
MeisterTask မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်နှင့်သင့် browser မှာ run သောအရှိဆုံးအလိုလိုသိစီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှု tool ကိုပါ!
ယင်း၏အစွမ်းထက်ပူးပေါင်း features နဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, Kanban-စတိုင်စီမံကိန်းကိုပျဉ်ပြားနှင့်အတူ, MeisterTask သင်နှင့်သင့်အဖွဲ့သည်အလုပ်စာရင်းများကိုစုစည်းအပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးအစားများနှင့်အရွယ်အစား၏စီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲပေးတယ်။ သင်တို့ကိုလည်း To-dos သင့်ကိုယ်ပိုင်များ၏အာရုံကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်အရေးပါသောနောက်ဆုံးနေ့လက်လွတ်ဘယ်တော့မှသေချာအောင်နေချိန်မှာသတိပေးချက်များနှင့်အတူက, သင့်အသင်းဖော် '' တိုးတက်မှုအပေါ်နေ့စွဲရန်သင့်အားဖွင့်ပေးသည်။
သို့သော် MeisterTask ရိုးရှင်းတဲ့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အလုပ်တခုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tool ကိုထက်ပိုမိုဖြစ်ပါသည်: အားလုံးသင်၏စီမံကိန်းဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံစိတ်ချစွာခပ်သိမ်းသောကာလမှာအားလုံးစီမံကိန်းကိုအဖွဲ့ဝင်များအတွက်လက်လှမ်းသေး, သိမ်းဆည်းထားရာနေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်; ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်သင့်အဖွဲ့သည်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအား get နှင့်သင့်တိုးတက်မှုကိုကိုခြေရာခံနိုင်မည့်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ကအလုပ်ပျော်စရာနိုင်ပါတယ်နေရာပဲ!
Feature ကိုပျေါလှငျ - အခမဲ့အခြေခံပညာအစီအစဉ်:
- စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်က ဖန်တီး. သင်နှင့်အတူပူးပေါင်းအခြားသူတွေဖိတ်ခေါ်
- အားလုံးသင့်အလုပ်များကိုမှအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ Dashboard ကို
- စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း / Predefined စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း
- အသိပေးချက်များသင့်ရဲ့အသင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ် up to date ဖြစ်နေသငျသညျစောငျ့ရှောကျ
- အားလုံး devices တွေကိုဖြတ်ပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်ရေး
- မှတ်ချက်တွေနှင့်တာဝန်များကိုအပေါ် like နှိပ်
- ပေါင်းစည်းအချိန်ခြေရာခံခြင်း widget က
Feature ကိုပျေါလှငျ - Pro ကိုအစီအစဉ်:
- စီမံကိန်းအတွက်အုပ်စုများ Create
- ဒိုင်ခွက်နှင့်စီမံကိန်းများအတွက်ထုံးစံနောက်ခံပုံရိပ်တွေ Upload လုပ်ပါ
- အမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်များနှင့်အတူ Workflows အလိုအလျောက်
Feature ကိုပျေါလှငျ - စီးပွားရေးအစီအစဉ်:
- သင့်အဖွဲ့အုပ်စုများ Add
မှတ်ချက်: MeisterTask အခမဲ့အကောင့်မှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ သငျသညျပြီးသားအကောင့်တစ်ခုရှိပါကမိုဘိုင်း app ကို အသုံးပြု. အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
MeisterTask ဤနောက်ဆုံးပေါ် update ကိုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဝဘ်ဗားရှင်းအတွက်ပူဇော်သူများနှင့်အတူ Dashboard ကိုအတွက် sorting ဖြစ်နိုင်ခြေ align ။
သငျသညျယခုအက္ခရာစဉ်ကြောင့်ရက်စွဲအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှပေးအပ်သောတာဝန်များကို sort သို့မဟုတ်သူတို့ကိုစီမံကိန်းကြောင့်အုပ်စုဖွဲ့ရှိသည်ဖို့နိုင်ကြသည်။ ကြယ်သင်္ကေတကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းသာတာဝန်များကိုဖော်ပြရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဖမ်းယူနားဆင်နေပါ, လာမယ့် update ကိုတိုးတက်မှုရှိနှင့်ပြီးသားပါ!
MeisterTask: အသင်းများအဘို့ Task ကို & Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု
18.97 ကို MB
Wrike - Project မှ ...